Uthembisa lukhulu umqeqeshi weChiefs - Ilanga News
Home Ezemidlalo Uthembisa lukhulu umqeqeshi weChiefs
Uthembisa lukhulu umqeqeshi weChiefs
Ubona abadlali abazobasayina bezoba wukhiye
UMQEQESHI weKaizer Chiefs, uGavin Hunt uthembisa abalandeli bale kilabhu ukuthi ziseza izinsuku zenjabulo.
UTHEMBISA lukhulu umqeqeshi weKaizer Chiefs esiphenduke inhlekisa ebholeni laku-leli njengoba ishaya udaka.
IChiefs izogadulisana neBaroka FC koweDStv Premiership namu-hla ngoLwesine ngo-15h00 ePeter Mokaba Stadium, ePolokwane.
IChiefs iya kulo mdlalo nje, izi-nto ziyihambela kahle emidlalwe-ni yeCaf Champions League nje-ngoba ingene kuma-quarter final okokuqala ngqa.
Nokho uma sekuza ngase bhole-ni lakuleli ishaya udaka njengoba ingaphandle kwe-top 8.
UHunt ofike kwiChiefs kubhe-kwe lukhulu kuyena njengoba edume ngokudla izicoco zeligi uthembisa lukhulu.
“IChiefs ingilethe lapha ukuba ngizoyinqobela izinkomishi noma kanjani isazozinqoba izinkomishi lesi yisethembiso engisenzayo.
“Okumqoka okufanele sikwenze wukubhekisisa kahle isikwati esi-naso sibuyise ukulangazelela no-kukhukhumala okwaziwayo kuba-dlali beChiefs.
“Kusale kancane ngesizini eye-dlule ukuba banqobe isicoco seligi kodwa kufanele silwele izinkomishi makhona onke.
“Kodwa konke lokho kuthatha isikhathi ngoba kufanele sihlole kahle isikwata esinaso bese siletha abantu abafuna ukuba lapha bazodlala. Abadlali esizobasayinisa yibona abazoba wukhiye ukuya phambili.
“Uma sizobambisana sihambe ngendlela engifuna ngayo noma kanjani sizophumelela. Kodwa-ke konke akuzi ngokushesha, kuthatha isikhathi.
“Inkinga wukuthi abantu abanaso isineke. Asikanqobi lutho okwamanje, igxathu ngalinye konke kuzobe sekuzenzakalela,’’ kusho uHunt.
Akakufihlanga ukuthi akumja-bulisi neze ukuthi le kilabhu aye-nzi kahle eligini yakuleli.
Nokho uthi noma kanjani zizojika izinto.
Previous articleAbanavalo ngeDowns abeBucs
Next articleisichithile inkantolo isicelo sikazuma